Ivo vanogadzira chess nendiro Arduino UNO | Mahara emahara
Ivo vanogadzira chess nendiro Arduino UNO
Kune akatiwandei mhando dze chess dzakavakwa neFree Hardware. Chinangwa chevazhinji chess vatambi ndechekuvaka yemagetsi chess nayo iyo munhu anogona kutamba achipesana nemuchina kana kungoita kuti kufamba kwavo kuponeswe uye kutumirwa zvemagetsi.
Mune ino kesi isu tine muchina wakafanana uyo inogona kutamba chess uye inogona kutotimutsira zvidimbu, asi zvinoshamisa kuti Hardware haina simba, inongoda ndiro Arduino UNO.
Ndiro ye Arduino UNO iyo ndiro isingadhuri kune vakawanda asiwo haina simba rakanyanya kana tikachienzanisa nemamwe mabhodhi akaita seArduino MEGA kana Raspberry Pi. Pamwe chete nekushandiswa kwebhodhi iri, RoboAvatar, iye mugadziri wechirongwa ichi, akashandisa chimiro cheXYZ, chimiro chimwe chete icho chinoshandiswa mumaprinta e3D.
Ichi chimiro chinobatsirwa nemagineti zvidimbu izvo zvinobvumidza muchina kuti uwane iwo akaiswa zvidimbu zvakanyatsonaka. Pamusoro pe Arduino UNO uye chimiro, RoboAvatar yakashandisa Mux Shield uye maviri eMPP23017 I / O yekuwedzera machipisi. Uye zvakare, iye musiki akaronga chirongwa chePython icho chinobatsira kushandisa ese Hardware pamwe nemhedzisiro yemutambo weChess.
Neraki chirongwa ichi chemahara uye chinogona kuvakwa chero nguva. Kune izvi isu tinongofanirwa kuwana izvo zvekuvaka uye nekuzvivaka zvinoenderana nematanho e gwara rekuvaka iyo RoboAvatar yakatumira pane Instructables. Uye kwatinogona kuwana ese akadikanwa software kuti purojekiti ishande.
Iyi chess muchina chirongwa inonakidza kwazvo, asi haimire ive mhinduro inodhura kune komputa chess chirongwa. Kunyangwe iyo pfungwa yekushandisa ndiro Arduino UNO yemhando iyi yeprojekti inoita kunge inonakidza kwazvo uye zvinogona kutogoneka kuvaka 3D printa nerudzi urwu rwemahwendefa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Ivo vanogadzira chess nendiro Arduino UNO
Ultimaker inotarisa pane software yekuvandudza ye 3D kudhinda
Vaka iyo Yakakura Pasi Pasi Game Mukomana ane Raspberry Pi uye Akawanda eUchenjeri